PressReader - Isolezwe: 2017-10-13 - Cabangisisa uma uthenga imoto
Cabangisisa uma uthenga imoto
Isolezwe - 2017-10-13 - EZEZIMOTO -
SEKUYILO lelo langa lokuthi thina sonke esisemgwaqweni siyikhuze ithithibale insimb’yomlungu sisho sicinga indawo ephephile esizothi gozololo kuyo.
Asidedele ukuhamba kwezimoto ngenkululeko ngesikhathi thina sonke sicindezela amahazard ethu maqede sigebisele amakhanda ethu phezu kwale ngosi esiyithola kwelakho eliwela umfula ugcwele.
Namhlanje ngisukuma nokuthatha enye yezincwadi ezivela kubalandeli nabafundi bale ngosi abathumela ekhelini elithi hazardiso@gmail.com. Lena iphuma kumfundi ozibiza ngoNhlanhla kanti ifundeka kanje:Mnuz Shangase, ngesonto eledlule kushicilelo lwezimoto ngibone i-Haval H2 ngayithanda, ngiyithandiswe ukuthi iphakeme kahle futhi inebhuthi enkulu, ngoba ngiwumuntu ohamba nge wheelchair, ngicabangele ukuthi imoto yami le encane ingangena khaxa kahle ebhuthini.
Ngicela ukubuza ukuthi ngokubona kwakho ngingayithenga yini? Ngiyabonga Lo mbuzo ungithume ukuthi ngicwaninge ngomlando wale moto eyakhiwa yinkampani yamaChina, iGreat Wall Motors (GWM) okusukela odongeni olwakhiwa emandulo namanje lusekhona olutholakala kuleliya zwe olubizwa nge Great Wall of China.
Umlando wale nkampani yezimoto ezinze eChina uthi yasungulwa ngonyaka ka-1984 lapho ibigxile kakhulu ekwakheni amaloli namaveni. Ize yaqala ukwakha izimoto ezincane ngonyaka ka-2010.
Ngeminyaka yo-1990 le nkampani ibiholwa yibhungu elincane uWei Jianjun obeneminyaka engu-26 kuphela ngaleso sikhathi.
I-GWM iqhubekile yakha izimoto yangenisa emazweni amaningana okubala i-Egypt, Ethopia, Indonesia, Bulgaria, Russia, Iran nakulona leli lengabadi. Kodwa yehlulekile emazweni angooBrazil noThainland.
Uma ungena kwi-website yale nkampani uthola isiqubulo esithi bayathuthuka kancane-kancane, lokho okunginika isithombe sokuthi bayazibona ukuthi basengamavukana abakafiki esicongweni kodwa bayakhula.
Yize kungakabi bikho okubikwayo ngayo iHaval H2 ngaphandle kokuthi isacutshungulwa ngoba yintsha kodwa okubikwayo ngemoto eyiveni iSteed yakubo kweHaval ukuthi ivamise ukukhanyisa ilambu lesexwayiso ngenjini. Okunye okuvelayo ukuthi isteringi sayo sinokuhlupha sibe luqhanqashiya uma uthi uyayiswaya ingavumi kube zinkani zababili lokho okusho ubuthakathaka be power steering sakhona. Abanye bakhala nge timing chain esheshayo ukukhathala netiming belt ngisho ingakafiki ku 10 000 km. Kodwa lezi yizikhalo zabanye babantu abahamba nge Steed hhayi zonke.
Into ebangele ukuthi iHaval H2 siyiqhathanise ne Steed ukuthi zinkulu zombili kodwa lokho akusho ukuthi izinkinga zazo zizokwefana. Akhona amanye amaHaval o H1 no H3 kodwa iH1 incane kakhulu. Izimoto zase China zinomkhutshana wokuguga kabi, zivele ziwebezele umzimba zingakaze zabandakanyeka engozini ngakho uma ufisa ukuyigcina kungenzeka uyibone seyiyihlamvu ikhahlazekile hhayi ngoba kuwukuthi uyiphethe kabi kodw angoba basacathula.
Impendulo yama-hazard ithi, awudingi ibhuthi kuphela uma uthenga imoto usesimweni esifuze esikaNhlanhla. Qaphela nokuphakama kwayo imoto oyithengayo noma uyakhele iqhinga lokuthi uzogibela kanjani kule ngcokamela ye H2. Kodwa-ke ngokubuka le mibiko ungayithenga iHaval H2 kodwa kulindele ukuthi njengoba izinkinga zayo nobuhle bayo kungaziwa, uzozibonela ngendlela.
IHaval isikhiphe u H1, H3 no H6 ofike kuleli zwe ekupheleni kuka-Agasti. Ulandele uH2 nokukhombisa ukuthi kuyacaca ukuthi kukhona ukuvunwa yimakethe njengoba nesiqubulo sabo sikuveza ukuthi bayakhula kancane-kancane.
I H1 nakuba ungabuzanga ngayo kodwa ithanda ukulanda ufuzo lwe Toyota Yaris ne Verso kanye-kanye. Nayo inesifo sokuguga emzimbeni. I H3 yona ifunze uNissan X-trail yakudala kodwa ithanda ukuba umhuqa. I H3 ayizange yanda nesifo sokuguga kulukhuni ukuthi singasibona kahle.
ISteed ithi ayizishaye sa Isuzu kodwa ikhahlazeka kalula. Ngakho kufanele ucabangisise uma ufuna ukuthenga imoto ngoba izinkinga zayo sizoziqabuka ngawe nedlanzana eliyithengayo, kafushane sizozwa amanzi ngobhoko oluyini.
Ngikufisela inhlanhla kule moto yize kuzokuthwalisa kanzima ukugibela kuyona ngoba ithe ukuphakama futhi nawe ukuvezile ukuthi uyithandiswa yikho okusho ukuthi unalo iqhinga lokuthi uzogibela wehle kanjani.
Sengicela ukuthi siwavale la ama-hazard ethu sibuyele emigwaqweni sihambe ngokukhulu ukuhlonipha imithetho yomgwaqo injengoba injalo. Sethembe nezulu alisiphazamisanga kangako, sihlangane sisawuphonsa umbalane nangesonto elizayo kuyo le nkundla. Ngale kwalokho singayiqhuba indaba ekhasini lika facebook othi Igedlela Lami with Sthembiso Shangase. Yimi owenu nali ikheli ngezansi hazardiso@gmail.com
ECHINA iHaval yiyona SUV edayise kakhulu ngonyaka odlule njengoba kudayiswe angaphezulu kuka-1 million. Lena yiH2 efike kuleli maphakathi nonyaka